Fikarohana momba ny firaisana Sarin'ny fanahy na fanahy & fanahy: Ny fanahy dia manome modely izay mitaona fisehoana ara-batana - fikarohana Reincarnation
Taorian'ny lozam-pifamoivoizana iray tao amin'ny Fatal, dia naka sary tao amin'ny polisy ny polisy iray
Misy Fanahy Masina hita na Ghost na sary
Indray hariva amin'ny ririnina, tanora efatra no nandeha fiara nitondra ny ala Minnesota. Nisy fotoana, zazalahy kely iray tao ambadiky ny fiara nifindra tany amin'ny seza mpandeha teo aloha ary ilay zazalahy teo aloha dia nipetraka teo amin'ny seza aoriana.
Talohan'ny nahafahan'ilay zazalahy nifindra teo aloha nanamboatra ny fehikibony, dia nivily lalana ilay fiara ary nidona tamin'ny hazo. Novonoina ilay zazalahy nipetraka teo amin'ny fipetrahan'ny mpandeha, raha tsy naratra kosa ireo zatovo telo hafa.
Tonga tany an-toerana ny tafika iray any Minnesota. Ny foiben'ny radio niasa dia niangavy fanampiana. Raha niandry ny fahatongavan'izy ireo izy dia nanomboka naka sary izy ireo mba hamoahana ny loza. Nivadika tao amin'ny laberan'ny polisy izy.
Nisy teknisiana laboratoara polisy tonga tany amin'ny miaramila an'ny fanjakana ary nilaza taminy fa misy sary tsy dia mahazatra loatra ny sarin'ilay lozam-pifamoivoizana, satria hita fa hita teny ambonin'ny fiara ilay fanahin'ilay zazalahy maty. Ilay teknisianina ao amin'ny laboratoara polisy dia nanome ny sariny ho an'ny mpiaram-panjakana, satria tsy fantatr'ilay teknisianina izay hatao amin'izy ireo.
Clairvoyant Echo Bodine miditra ao amin'ny fahitana
Ny tompon'andraikitry ny fanjakana koa dia tsy nahazo antoka hoe inona no tokony hatao amin'ireo sary goavambe ireo. Noho ny toro-kevitry ny namana dia nifandray tamin'ny tafika Echo Bodine, izay nilazana azy dia mari-pahaizana malaza tany amin'ny faritr'i Minneapolis.
Nanamboatra fandaharana mba hijery an'i Echo ny tafika ary rehefa nihaona izy, dia nasehony azy ny sary matoatoa. Nomeny an'i Echo ny sary, nasainy notehiriziny sy hanaovana izay noheveriny fa tsara indrindra.
I Echo dia nitazona fahatokisana an'ireo sary ireo nandritra ny taona maro. Mankasitraka azy izahay noho ny namelany ireo sary nampiditra tao amin'ny ReincarnationResearch.com.
Ny fiasan'ny Fanahy izay mitabataba dia manohana ny maha-marina ny sary Ghost
Raha ny sary misy ny fanahin'ny zazalahy efa maty nisondrotra ambonin'ny fiara dia tena izy fa tsy karazana artifact, dia misy fiantraikany lehibe io sary fanahy io. Mety hisy hieritreritra fa ny laboratoara polisy dia mety hanilika ny tsy fetezan'ny fakantsary, anisan'izany ny fampisehoana indroa, alohan'ny hanomezana ireo sary ho an'ny mpiasan'ny fanjakana.
Nahatsapa i Echo fa ilay zazalahy manana endrika fanahy dia miantsoantso hoe “Tsia!” - satria tsy vonona ny ho faty ilay zazalahy.
Ny sary eto ambany sy eo amin'ny ilany havanana dia mampiseho ilay zazalahy maty nipetraka teo amin'ny sezan'ny mpandeha teo aloha, nilatsaka teo am-baravaran'ny fiara. Amin'ity posture ity dia tsy azony nohazonina ilay fihetsiketsika mavitrika, izay azo alaina amin'ny sarin'ilay fanahy miakatra ambonin'ilay fiara.
Ity zava-misy ity dia manohana fa ireo dia tena sarin'ny vatan'ny olona iray.
Tsy fantatra mazava ny tarehin-jiro misy ny jiro manodidina ny vatan'ilay zazalahy maty. Mety ho ireo tsipika fahazavana ireo dia ampahany amin'ny vatan'ny fanahin'ilay zazalahy miala amin'ny vatana ara-batana, alohan'ny hifaneraserana ivelan'ny vatan'ny vatana.
Ireo sarin'ny Ghost dia manohana fa misy mombamomba ny angovo ananan'ny fanahy
Ny sarin'ny tarehin'ilay zazalahy mitsingevana eo ambonin'ilay fiara dia manohana ny laharam-pahamehana fa misy vatana fanahy manohana ny vatana ara-batana.
Ny maodely momba ny angovo sy ny fisehoan'ny vatana